Bishop of Southwark asks Government about economic situation and violence in Zimbabwe – The Church of England in Parliament
Bishop of Southwark asks Government about economic situation and violence in Zimbabwe
On the 5th February 2019 Rt Revd Christopher Chessun, Bishop of Southwark, received answers to two written questions about the economic situation and violence in Zimbabwe.
The Lord Bishop of Southwark: To ask Her Majesty’s Government what discussions they have had with international partners about the current economic situation in Zimbabwe and the impact of that situation on the citizens of that country. [HL13029]
Lord Ahmad of Wimbledon: We have regular discussions with the International Monetary Fund, the World Bank, UN agencies and other international partners on the economic situation in Zimbabwe and the impact on the Zimbabwean people.
The Lord Bishop of Southwark: To ask Her Majesty’s Government what representations they have made to the government of Zimbabwe following the recent violence and deaths associated with the protests in that country. [HL13028]
Lord Ahmad of Wimbledon: The Minister for Africa, Minister Baldwin, spoke to Zimbabwe’s Foreign Minister on 29 January. The Minister also summoned the Zimbabwean Ambassador on 17 January to express our concern at the ongoing situation in Zimbabwe. Minister Baldwin urged Zimbabwe to stop disproportionate use of force by the security forces and investigate any cases of alleged human rights abuses. On 21 January the Foreign Secretary, in a public message to President Mnangagwa, urged him not to turn back the clock and to work with all Zimbabweans in dialogue for a better future.
We will continue to raise our serious concerns and push for a thorough investigation with the Government of Zimbabwe, through our Embassy in Harare and Ministerial interventions.
Author parliamentaryunitPosted on Tuesday, February 5, 2019 Friday, February 8, 2019 Categories QuestionTags foreign affairs, Southwark, Zimbabwe
Previous Previous post: Bishop of Durham asks Government about community organisations access to new shared prosperity fund
Next Next post: Bishop of St Albans asks Government about support for young gambling addicts